Halloween - usiku izere madhimoni | Apg29
Chokwadi pamusoro Halloween. Halloween chinhu kupfuura tsika imwe wechihedheni wekare kuti hapana anofanira kuita, mudukusa zvose muKristu. Rufu uye zvakaipa akudzwa.
Munguva 1840s, akatora kazhinji Irish naye uyu Celtic kupemberera kana vachienda America. In America, zvava mutambo mukuru, kunyange pakati pevaKristu uye rinopembererwa musi October 31. Kubva America, rine "Americanized" kwemakore, vakadzokera Europe ne "skulls" pamhango manhanga, muroyi-yakatarwa, shamisa zvifukidziro, dzine, dhiabhorosi maforogo tombstones mupurasitiki kana matanda.
"Saka ndizvo sei kuuraya, mbuya, baba, varumudzani, shamwari taitsvaka akafanana kana vadzoka kubva kuvakafa sezvo zvipoko, marangwanda nemadhimoni!"
Halloween iri kutanga chiKristu dzechihedheni anenge akabva ainyanya pakati vanhu chikwata vaCelt. Ndivo Pakutanga kubva Asia Minor, kunyange kubva muGaratiya (Turkey ano).
The vaCelt anotaurwa mu European kare, kekutanga kumativi 500 BC, kana mushure vaitamira vaigara ipapo nechekuchamhembe Europe; nzvimbo yakapoteredza Danube uye kumadokero Germany. MuEurope, vakaenda nezita "gaeler" kana "afoot".
Munguva kuwedzera nguva nechisimba kuti vaCelt rakawedzerwa nzvimbo dzavo, kumavirira kune Belgium uye zvikurukuru Britain, kunyanya Ireland, kumaodzanyemba Italy uye Spain uye uchienda Asia Minor, apo vakagara zvakare muna muGaratiya.
"Galates" aivawo Greek zita nokuda vaCelt. Zvishoma nezvishoma akasvika Scotland, Wales uye Ireland zvikurukuru, pakunzi kumba vaCelt. Celtic mitambo yechitendero, uye upenyu zvarwo, akatungamirirwa kuburikidza zvemashura chiitwa nesimba pamwechete druids (mupristi-madzimambo). chibayiro tsika zvinomera, kazhinji Mistletoe uye yakabikwa chikafu, vachifara chingwa, vakanga zvakajairika okunze, asi zvibayiro zvevanhu chakaitika (ona Lindow Man muna Manchester, uyo marangwanda rakaonekwa muna 1984).
Upenyu uye rufu mwari Samhain
Stonehenge muEngland runoonekwa pakati vanotsvaka ano mu "keltism", kuva nyanzvi muteresi zvemashiripiti simba. Izvi ndipo ano zuva varoyi uye nevashamani kuti séances uye dzinoiswa mhemberero. The vaCelt vaipemberera mutambo wokukohwa uye New Year musi 1 November. Raiva zuva wechihedheni dzvene. The bato kwakaratidza kuguma chirimo uye nokudaro rufu uye kwematsutso rima kupinda zvakasikwa, izvo pachazvo raireva idzva mavambo upenyu. Panyika, ari mashizha akawa, kumera matsva Mabumba.
Panguva ino gore aireva zvakare, kuti chidzitiro pakati mupenyu vanhu munyika uye vakafa nyika (pakati incarnations) raiva thinnest. The manheru asati New Year, ichi "manheru mutsvene" kuti "kuzobayira Evha", kureva October 31, kana vakange pfungwa yokuti vakafa, vanenge vaya vakafa mugore rapfuura, uye vamwe, zvakanaka nezvakaipa masimba uye mweya - vakadzokera pasi pasi basa roupenyu mwari rufu (chiedza nerima) Samhain. Iye akatonga zvose pezvakasikwa uye paSheori.
On 31 October saka akanga zvose zvose vapenyu uye manheru akafa. It Anonziwo "Ancestor Night," "Anfädernas Night" kana "madzitateguru 'usiku".
Musangano chena uye kutsinga
Kana vakafa, uye mamwe masimba uye mweya, vakasvika Earth manheru ichi, aitofanira, kune rumwe rutivi, yakavhenekerwa makenduru uye omoto zvakanaka kuti vakaita kuti nzvimbo mavakanga kugamuchira, kunongedza navo, fadza kwavari kutarisa saivo, uye pamusoro mumwe kuvhiringidza zvikara uye unozvidzinga shure pakarepo, tarisa kupfuura ivo uye vachengete imba inotonhorera.
Light, moto, ropa, zviratidzo rufu uye rima vakanga yakavhenganiswa. White uye kutsinga wazvakataura, neminondo ari kutsinga. Druids dzakavhenekera omoto makuru unozvidzinga zvisikwa ngozi dzakadaro Varoyi zvakaipa achibhururuka. Vanhu vakabvunzwa kuti ariswededze pachake moto imba uye pachinzvimbo kukopa moto itsva maererano Druids moto kuti vazvidzivirire.
Avo vakabva mweya wenyika, aigona zvose zvipo nokuti New Year Somuenzaniso, vimbiso kudzoka nechiedza mushure mokuparara nechando uye ibereke zvakanaka mugore rinouya - kana kukopa mweya yevaya vakafa ichi manheru / usiku, kunyange zvinoda kuzvipira kwevanhu kuti gore idzva. It kunetseka zvakanakira kana kutukwa.
Heino hwaro nyaya vamwe vana panguva kuti pamukova usiku pamberi All Saints Day: "Candy kana bhazi", "Wandinyengedzerei-kana-vaitire" ( "Spratt kana chipo"). Samhain yakanga kuudzwa zvose mupi uye viikatemies. Saka aitarisirwa kuremekedza. mabiko The Christian Church kwakaita All Saints Day, akasimuka kukunda kukohwa mutambo wechihedheni Celtic.
Uye Irish tsika dzechiKristu vepakutanga chaiva kupemha chingwa mudzimba, uye dzokai, kunamatira mweya yevakafa hama. Pakupedzisira paiva nyongano, zvichida mhinduro zvemashiripiti "förkristnandet" - kunyange dzechihedheni matanda matsvene uye dzakakwirira akanga ratemwa uye kutsiviwa nemachechi echiKristu uye makuva - kuitira kuti "vose vapenyu nevakafa usiku," wechihedheni pfungwa, akanga, vamwe kumusoro kufamba "Allahelgonaafton", mune mamwe mazwi Halloween.
Munguva 1840s, akatora kazhinji Irish naye uyu Celtic kupemberera kana vachienda America. In America, zvava mutambo mukuru, kunyange pakati pevaKristu uye rinopembererwa musi October 31. Kubva America, rine "Americanized" kwemakore, vakadzokera Europe ne "skulls" pamhango manhanga *, muroyi-akatarwa, shamisa zvifukidziro, dzine, dhiabhorosi maforogo tombstones mupurasitiki kana matanda.
Vamwe Data zvinoratidza yaiva kufambidzana majee sezvo 1991 akatanga pakuparurwa kuSweden. Mumwe flyer kubva cheni zvokudya makore mashoma apfuura aiva: "Naizvozvo unganidzai spökkompisar uye dhiyabhorosi dzako neshamwari kuti Halloween bato chaiyo uye Gadzirira usiku izere madhimoni."
Saka ndizvo sei kuuraya, mbuya, baba, varumudzani, shamwari taitsvaka akafanana kana vadzoka kubva kuvakafa sezvo zvipoko, marangwanda uye madhimoni! Sei kuigadzira haaiti zvanyanya kufanana inonzi mweya wakanaka uye "ngirozi" iri zvemidzimu, kana uchida kutevedza hama dzavo neshamwari vakafa - uye kuti iye zvino kunoreva kudzokera?
Pachena Halloween rakazvarwa yeSweden vakawanda chete ane mhosva mutambo, pasina vakafunga kuti zvaizova chimwe chinhu shure. Asi nei murima uye zviri zvakanaka kuti pachena? Ko tyisa kucharatidza yokusafa kufunganya?
Kidding murume norufu kuti kutiza basa pamberi rufu chairo? Halloween inofanira kuonekwa sechinhu chinodiwa kutiza chokwadi? Hongu, Halloween chinhu kupfuura tsika achembera dzechihedheni kuti hapana anofanira kuita, mudukusa zvose muKristu. Rufu uye zvakaipa akudzwa.
Kuchikoro, vana vanodzidza kusiya mhirizhonga. Zvino anotaura zvakawanda nezvokuchengetedza vana, kutanga kufunga zvevana kunakira. The Humanism uye zita rusununguko zvaipiwa panguva imwechete vana ava rufu uye mhirizhonga zviratidzo muzvikoro, vezvenhau uye vamwevo. Double mitemo uye naivety, ndinoti! yedu kudiwa bato pane pano kuSweden munguva refu uye rima kwematsutso kukuru sei, Halloween haasi muenzaniso wakanaka!
Tapota cherechedza, somuKristu, mumweya nyika uye munzvimbo gakava pamusoro yechihedheni mwana-venga manheru ichi. Asi Pindura apo achitamba costumed vana muKristu nokuchenjera. Itii, Somuenzaniso, zvakanaka, kuti haupembereri Halloween. Kupfuura izvozvo kazhinji yorega kuva. Kuedza "vaKristu" Halloween, ndinoreva Ukuwo, ndiyo nzira chakaipa kuenda.
* Maererano ane Irish ngano, paiva mupfuri akaipa ainzi Jack. Jack akanyengera dhiabhorosi akamuita kuvimbisa kumbobvira vachitora mweya wake. Paakazosvika akafa, iye chakarambwa vapinde denga nokuti akaita zvikuru panyika. Ipapo iye aigona anoguma naDhiyabhorosi, akaramba mweya dzinodzungaira panyika. Akakumbira Dhiyabhorosi dzinenge awane Lantern. Dhiyabhorosi the kana moto diki muchanza tabapi Jack vakadya. Kubvira ipapo achitsauka restlessly kumativi kwake "Lantern" uye kutsvaka pokugara. Mumitambo uye ngano akadana mumwe rambi idzodzo "Jack-haiwa-Lantern", kunyanya aiming unozvidzinga kubvisa mweya yakaipa chete.